Ngisho noma ungakhathaleli izindaba zakamuva zezombangazwe, uNgqongqoshe wasezweni laseRashiya angakwazi ukukukhathalela kuphela. USergey Lavrov useyisikhathi eside eba yinkanyezi ye-intanethi ngokubonga kwakhe.
Ngakho, inkulumo kaLavrov "Debil, bl ****" yaba nephiko futhi manje uhlala impilo yokuzimela.
Ekupheleni noma ekuqaleni konyaka, kunomkhuba wokuhlanganisa. Unyaka odlule kwakungelula eRussia. Izigwegwe, eziye zalahleka isikhathi eside, ezinye izinto ezimbi kakhulu zangezelwa ngo-2017.
Ngemuva kokunqoba okhethweni e-United States, uDonald Trump, waseRussia usolwa ngokuphazamisa emkhankasweni wokhetho. Futhi nakuba kungekho muntu oye wakwazi ukubona noma yikuphi ubufakazi obomgomo nobuqine bokubandakanyeka kwezinsizakalo ezikhethekile zaseRussia ekunqobeni kukaTrump, akekho oye wafaka icala. Ngaphezu kwalokho, manje iRussia kuthiwa iphazamise inqubo yokhetho kwamanye amazwe.
USergey Lavrov uqinisekise ukuthi iRussia iphazamise ezombusazwe zangaphakathi zamazwe ahlukene
Ngokushesha ngaphambi konyaka omusha, uSergei Lavrov waba yisimenywa ohlelweni lukaMbhali weTigran Keosayan.
Phakathi nengxoxo, umqondisi wakwazi ukuthola ukuthi ngonyaka odlule iRussia ingenele kuwo wonke ukhetho, okwenzeka nje emhlabeni. Ama-secret agents asekhaya asebenza kuyo yonke indawo - ashukumisa ukhetho eFrance, inhlolovo eCatalonia, isinqumo saseBrithani sokuhoxisa e-EU ... USergey Lavrov waqhubeka nohlu, ebona ukuthi iRussia nayo inethonya eSweden, eDenmark, eMontenegro, eMakedoniya nase-Austria.
Lokhu ukuhlanganiswa kwakuyisizathu sokuthi iRussia ayizange ikwazi ukungenelela inqubomgomo yasekhaya yaseJapane. Nokho, uSergey Lavrov waqinisekisa ukuthi ngo-2018 lokhu kuzolungiswa:
Kakade manje sesikulungisa. EJapane, kukhona umkhosi wemasiko onempumelelo enkulu, ngakho akudingeki ukhathazeke ... Nakuba umbusi waseJapane engaphathi ukukhishwa okwamanje. Wabuthana, kodwa ngemva kweminyaka emibili kuphela. Senze konke ukwenza lokhu kwenzeke maduzane ...
Ngokuqinisekile, ukuqashelwa kukaSergei Lavrov kungase kube ukuzwa, ngenxa yokuthi inani lezigwebo ezibhekene neRussian Federation liyokhuphuka kabili. Uma ungazi ukuthi uhlelo lwe-International Sawmill lukaTigran Keosayan luhlekisa. Izilaleli zaqaphela ngentshiseko ukuthi uNgqongqoshe waseRussia wezangaphandle wazizwa ngendlela ehlekisa ngayo:
lenchikextrim Sense of amahlaya kokubili ekuphakameni! Noma kunjalo, uNgqongqoshe Wezangaphandle uyona engcono kakhulu !!!
elya.elegiya Lokhu kuhle lapho uNgqongqoshe Wezangaphandle ehleka ngamahlaya, ekilasini
putilova_olga Okukhulu, uLavrov wenza kahle!
shkodniy_papa I-chota ephuliwe !!! I-muzhiks engenangqondo! Kanjalo nje, ngamahlaya kuleli zwe ungagcina impilo yakho!
Abesifazane besithandwa sika-Elena Proklova basabela embukisweni wakhe
U-Kurban Omarov akaboni ikusasa lakhe eduze noKsenia Borodina
I-Pelageya ibonise isithombe sezinyosi
U-Agat Mutseniets noPavel Priluchny bagxekwa ngenxa yokuntula ukunambitheka, isithombe
Canapes yonyaka omusha
Indlela yokuthola ukuthi yini ezoholela encwadini ye-office?
Isitayela sengu-80: izingubo kanye ne-makeup
Indlela yokuthola umphathi kusuka kumphathi
Umlingisi uHugh Grant
Ikhekhe "I-Wall Great Chocolate"
Izakhiwo eziwusizo zeTioioi
Uhlobo luni lwezicathulo okufanele uzigqoke nge jeans?
Akuchaziwe, kepha kuyiqiniso, kuyiqiniso noma kumanga
Impendulo ethinta inhliziyo evela kubazali ekutholeni iziqu enkulisa, isigaba 4, 9, 11